Yaa hortaagan Horumarka Degmada Dayniile ee gobolka Banaadir (Runta ogow) | Baahin Media
Degmada Dayniile ee gobolka Banaadir waxa ay kamid tahay degmooyinka ugu nabdoon uguna baaxada weyn gobolka Banaadir, waxaana sanadihii ugu dambeeyay degmadaasi degay kumanaan kun qof oo kasoo guuray degmooyinka kale ee gobolka Banaadir.
Marka aad eegto degmada Dayniile ayaa wali u muuqata mid wax badan ka dambeysa degmooyinka kale ee gobolka Banaadir marka loo eego dib u dhiska iyo sidoo kale dhinaca ganacsiga, Waxbarashada iyo guud ahaan arimaha bulshada.
Inta badan dhulalka kuyaala degmada Dayniile gaar ahaan dhinaca xiga xarunta Degmada iyo qeybo badan oo kamid ah degmada ayaa ah dhul banaan oon dhisneyn ama goofaf aan cidna degneyn.
Dhulalka degmada Dayniile kuyaala gaar ahaan kuwa aan dhisneyn ayaa waxaa inta badan iska leh ganacsato hanti badan heesata oo Muqdisho kunool iyo dad Qurbaha degan, kuwaa oo marnaba dooneyn in ay dhistaan balse ujeedkoodu yahay in dhulka isaga yaalaan oo mustaqbalka lacag badan u noqdo.
Dadka iska leh inta badan dhulalka kuyaala degmada Dayniile ayaa ah kuwa hortaagan horumarka degmada Dayniile, waxaana dadkan u oodan boqolaal boos oo kuyaala degmada Dayniile oo aysan dooneyn in ay dhistaan ama ka iibsadaan dadka doonaya in ay dhistaan.
Sida aan xogta ku heleyno dadka hortaagan horumarka degmada Dayniile ayaa ah dadka asal ahaan kasoo jeeda degmadaasi, mana ahan dadkaasi kuwa jecel horumarka deegaanka ay kasoo jeedaan.
Maamulka degmada Dayniile uu hogaamiyo Maxamed Abuukar Jacfar ayaa marar badan isugu yeeray ganacsatada iyo dadka inta badan leh dhulalka kuyaala degmada Dayniile, waxa uuna ka codsaday in ay dhistaan dhulkooda kana qeyb qaataan horumarka degmada.
Dadaalada maamulka Degmada Dayniile ayaa inta badan miro dhalin , waxaana dhagaha ka fureestay baaqyadii loo jeediyay in dhulkooda dhgistaan ganacsatada iyo qurbo joogta dhulalka ku leh.
Ganacsatada dhulalka tirada badan ku leh degmada Dayniile ayaa qaarkood waxa ay horumarin iyo dhismooyinka xaafado casri ah ka wadaan degmooyin kale oo kuyaala gobolka Banaadir halka degmada ay kasoo jeedaan la jeclaadeen dib u dhac.
Baaqa maamulka degmada Dayniile ee ku aadan in dhulka la dhisto waxaa qaatay qaar kamid ah dadka leh dhulka kuyaala hareeraha laamiga oo dib u dhis bilaabay kana dhisay xarumo u badan kuwa ganacsi.
Degmada Dayniile ayaa markii maamulkeeda loo magacaabay Maxamed Abuukar Jacfar waxaa laga dareemay horumar iyo isbadal deg deg ah, waxaana la dhistay dhulal badan oo kuyaala aaga xarunta degmada gaar ahaan hareeraha laamiga.
Maamulka Degmada Dayniile ayaan wali ka quusan ka shaqeynta horumarka degmada Dayniile , waxa uuna mamaulka qabtay Shirar badan oo loogu magac daray u hiili Horumarka degmada Dayniile.